Fitsaboana nentim-paharazana eny Ankadimbahoaka : Renim-pianakaviana voasoloky 20 tapitrisa Ariary -
AccueilSosialyFitsaboana nentim-paharazana eny Ankadimbahoaka : Renim-pianakaviana voasoloky 20 tapitrisa Ariary
16/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Ramatoa iray no voasoloky vola mitentina 20 tapitrisa Ariary, rehefa nanatona vehivavy antsoina hoe Miora, mpitsabo nentim-paharazana iray eny Ankadimbahoaka. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny polisim-pirenena nandray an-tanana ny raharaha, dia nanaraka fitsaboana am-bolany maromaro tao amin’io olona voalaza anarana etsy ambony io, ity renim-pianakaviana. Nolazain’io mpitsabo io fa mosavy no nahazo azy, ary io vola be io no notakiany hitsaboana ny aretin’ity niharan-doza sy ny vidin’ny vatosoa entina hanatanterahana izany, izay mitentina 12 tapitrisa Ariary. Nentin’ny fahatokisana noho ny fandresen-dahatra sy ny fahaiza-miresaka nataon’io vehivavy io ireo voasoloky, ka nandoa ireo vola avy hatrany tsy am-pisalasalana.
Tsy nahitam-piovana ary tsy nety sitrana anefa ilay marary. Tsy hita ihany koa io vato sarobidy izay nampanantenain’ity mpisoloky ity, ka nangataka ny hamerenana ny volany ireo olona ireo. Narirariran’ity farany teny foana anefa io ramatoa io sy ireo zanany roa vavy izay nitondra ny reniny tao amin’ity milaza ho mpitsabo nentim-paharazana, ka nanapa-kevitra ny hametraka fitoriana teny amin’ny kaomisaria foibe eny Tanjombato. Rehefa nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana , dia voasambotra teny Ankadimbahoaka niaraka tamin’ny lehilahy fofom-badiny, ny tolakandron’ny latsinaniny lasa teo io mpisandoka ho mpitsabo nentim-paharazana io.
Niroso tamin’ny fisavana ny tranon’ity mpisoloky ity avy hatrany ireo mpitandro filaminana, ka tamin’izany no nahatrarana ody gasy iray gony sy tamin’ny vata maromaro tao amin’izy ireo.